စျေးပေါသောချေးအစိုင်အခဲ - အရည် Separator စက်ပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ။ | YiZheng
Inclined Sieving Solid-အရည် Separator ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်ရေးကိရိယာဖြစ်ပြီးကြက်၊ ၎င်းသည်ကုန်ကြမ်းများနှင့် fecal မိလ္လာများကိုတိရစ္ဆာန်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှအရည်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာနှင့်အစိုင်အခဲအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။ အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာအရည်ကိုကစော်ဖောက်ခြင်းပြီးနောက်သီးနှံအသုံးချခြင်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပြီးမြေသြဇာကင်းမဲ့သည့်inရိယာတွင်မြေဆီလွှာတည်ဆောက်မှုကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းသည်အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာအဖြစ်လည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထောက်ပံ့သောအရည်ပန့်ကိုမူရင်းမြေ water ဇာကို separator သို့ပေးပို့ရန်အသုံးပြုသည်။ အစိုင်အခဲပစ္စည်း (ခြောက်သွေ့သောမြေ) ဇာ) ကိုဖန်သားပြင်တွင်တပ်ဆင်ထားသောလိမ်ဝင်ရိုးများမှတွန်းထုတ်ပြီးအရည်သည်ဆန်မှတဆင့်ထွက်ပေါက်မှထွက်သည်။
ရှိုသောဆန်ခါအမျိုးအစားအစိုင်အခဲ - အရည် Separator ၏ဖွဲ့စည်းပုံ
The ရှို Sieving အစိုင်အခဲ - အရည် Separator အဓိကအားဖြင့်ဆန်ခါ၊ လိမ် winch နှင့်လိမ်ဓားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသောသံမဏိ ၃၀၄ နှင့်အထူးပြုလုပ်ထားသောသံမဏိများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောချေးခြင်းနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဒါဟာအလားတူထုတ်ကုန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဝန်ဆောင်မှုဓာတ်လှေကား၏ 2-3 ကြိမ်ရှိသည်။
Inclined Sieving Solid-Liquid Separator ၏အင်္ဂါရပ်များ
အဆိုပါရှိုဆန်ခါအစိုင်အခဲ - အရည် separator ၏ setting ကို function ကိုပြည့်စုံခြင်းနှင့်ပစ်မှတ်ထားသည်။ စက်ဒီဇိုင်းတစ်ခုလုံးသည်သန့်စင်စက်စွမ်းအားနှင့်ကုသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးတက်စေသည့်ချေးမြစ်ရေတင်စနစ်၊ တုန်ခါမှုစနစ်၊
၁။ အသစ်စက်စက်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်ရေးကိရိယာ။
၂။ မွေးမြူရေးနှင့်ကြက်မွေးမြူရေးခြံများမှအညစ်အကြေးများကိုအစိုင်အခဲ - အရည်ခွဲခြင်းအတွက်ထိရောက်စွာဆက်ဆံပါ။
ရှိုသောဆန်ခါအစိုင်အခဲ - အရည် Separator ၏အားသာချက်များ
1.It သည်ကြီးမားသောအပိုင်းများကို ဦး စွာစီစစ်ခြင်းနှင့်စစ်ထုတ်ခြင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ အမှိုက်ရှင်းအကွေ့အကောက်များသောပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်လုံလောက်သောလည်ပတ်မှုပြtheနာများကိုဖြေရှင်းရန်ဂီယာ၊ နှိပ်ခြင်း၊ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းနှင့်သဲများဖယ်ရှားခြင်းစသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။
၂. စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများတွင်ရေပေါ်၊ ဆိုင်းထိန်းထားသောအရာများနှင့်အနည်အနှစ်များခွဲထုတ်မှုနှုန်းသည် ၉၅% ကျော်ပြီးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏အစိုင်အခဲပါ ၀ င်မှုသည် ၃၅% ကျော်ရှိသည်။
3.It တွင်အလိုအလျှောက်အရည်အဆင့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အလားတူပစ္စည်းကိရိယာများထက်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၏ ၅၀% ကျော်ကိုသက်သာစေသည်။
4. ပစ္စည်းကိရိယာ၏အစိတ်အပိုင်းသည်အပြောင်းအလဲအတွက်အလတ်စားနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသောအရည်အသွေးမြင့်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးချဉ်ခြင်းဖြင့် passivated ။
ရှို Sieving အစိုင်အခဲ - အရည် Separator ဗီဒီယိုပြသမှု
ရှို Sieving အစိုင်အခဲ - အရည် Separator မော်ဒယ်ရွေးချယ်ရေး
စွမ်းရည် (m³ / h)
နှုန်း Slagging- ချွတ်
ရှေ့သို့ static ဓာတ်မြေသြဇာ Batching စက်